Xarummaha dhiigga oo u baahan dhiig ka badan inta maanta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xilliyada fasaxda dhaadheer oo uu kaydka dhiiggu yaraado. sawir: Marcus Ericsson/TT
Xarummaha dhiigga oo u baahan dhiig ka badan inta maanta
La daabacay tisdag 16 april 2019 kl 12.25
Marka ey isku soo aadaan maalmo dhowr ah oo fasax la galo ayey caqabad kala soo gudboonaa cusbitaallada iyo goobaha daryeelka caafimaad inuu ku yaraado dhiig yabooha, sida ay sheegtay Karolina Blom Wiberg oo ka howlgasha xarunta dhexe ee dhiigga. Halka uu kaydka dhiigga u yaala gobollo badan uu aad u yar yahay.
Toddobaadka ciidda kirishtaanka ee loo yaqaanno Påsk-iga ayey qaar badan oo bulshada ka mid ihi qaataan fasax dheer, markaasina oo xarumaha kaydka dhiigga ay soo gaaraan dhiig ka yar kolka aan fasaxyada lagu jirin. Dhiigu waa walax daray ama cusayb ah, sidoo kale waa walax loo baahan karo xilli walba haddii fasax dheer lagu jiro iyo haddii aan lagu jirinba.
- Xilliga hargabka tusaale ahaan ayay dhacda in aaney dad badani dhiig ku yaboohi karin, sidaa daraadeed ayaa loogu baahan yahay tiro ka badan oo iska diiwaan gelisa liiska yabooha dhiigga, sida ay sheegtay Karolina Blom Wiberg, wakiilka xiriirinta xarunta dhexe ee dhiigga ee gobolka Stockholm.
Baahi degdeg ah
Gobollada qaarkood ayay ka jirtaa baahi guud ahaan yabooha dhiigga ama qaar ka mid ah noocyada dhiigga. Xitaa haddii ey gobolladu iska caawiyaan kolka ay baahiyi jirto haddana waxaa dadka lagu guubaabineyaa iney iney dhiig bixiyaan inta aan la gelin fasaxa ciidda påsk-iga.
Booqasho lagu talo xarummaha dhexe ee dhiiga ayaa qaadata 30-45 daqiiqadood, halka dhiig yabooha qudhiisu uu qaadaneyo illaa iyo 10 daqiiqadood. Wakhtiga ka soo hara ayaa ku baxa in foomamka caafimaadka la buuxineyo iyo wada hadalka kalkaaliyaha caafimaad. Waxaa sidoo kale wanaagsan in dhiig yabooha dabadii xoogaa la is dejiyo, sida ay sharraxaad ku bixisay Karolina Blom Wiberg.
- Saddex qof ayaa lagu caawin karaa dhiig uu qof keliya yaboohay, maadaama dhiigga loo kala saaro plasma, unugyada dhiigga cas cas iyo nooc kale oo ka mid ah unugyada dhiigga trombocyter waxa loo yaqaanno, ahna unugyada xinjirta dhiigga u sameeya, sida ay sheegtay.
Weligaa dhiig ma yaboohday?
Sidee loo bixiyaa?
Ma arag meel lagu bixiyo